वित्तीय स्वाबलम्बन केन्द्र (Financial Independence Hub)
वित्तीय स्वाबलम्बन केन्द्र
वित्तीय स्वाबलम्वन केन्द्रले तपाईलाई निम्न कुराहरूमा मद्दत गर्न सक्छः
के म वित्तीय स्वाबलम्वन केन्द्रका लागि योग्य छु?
हामी मद्दत गर्नका लागि यहाँ छौँ
वित्तीय स्वाबलम्बन केन्द्र अष्ट्रेलियाभरका वित्तीय दुरुपयोगबाट प्रभावित मानिसहरुको वित्तीय स्वाबलम्वन निर्माण गर्न र उनीहरुको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहायता गरिरहेको एक निःशुल्क, गोप्य, निजीकृत सेवा हो।
के तपाई निम्न कुरा गर्न चाहनुहुन्छ?
हरेक दिनको वित्तको नियन्त्रणको महसूस तथा पैसाका बारेमा निर्णय गर्दा आत्मविश्वासी हुन?
तपाईको आय र खर्चलाई बुझ्न?
स्वतन्त्ररुपमा बजेट बनाउन?
तपाईको खर्च तथा बचतको योजना बनाउन जस्तै कार वा घर किन्ने?
बिलहरु तिर्न वा अनपेक्षित खर्चहरुलाई पूरा गर्न सक्षम हुन?
ऋण तिर्न वा घटाउन?
एक व्यक्तिगत प्रशिक्षण (कोचिङ्ग) दिन्छ जसले तपाईको शक्तिलाई निर्माण गर्छ, तपाईलाई वित्तीय लक्ष्यको विकासमा मद्दत गर्छ र तपाईको दीर्घकालीन वित्तीय स्वाबलम्बनलाई निर्माण गर्ने व्यावहारिक कदमहरु लिन तपाईलाई सहायता गर्छ।
दिनदिनको वित्तिय अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न, योजना बनाउन वा लक्ष्यप्राप्तिका लागि काम गर्न तपाईको आत्मविश्वास बनाउनका लागि औजार तथा सीप दिलाउँछ।
पैसालाई बुझ्न- यसअघि तपाईको नियन्त्रणमा नरहेको क्षेत्रलगायतमा जस्तै बिल, ऋण तथा कम क्रेडिट स्कोर।
वचत गर्न शुरु गर्न जस्तै गाडी वा घर किन्न।
काममा फर्कन योजना गर्न वा सेन्टरलिङ्कमा दर्ता हुन सहायता गर्न। तपाईलाई आवश्यक अन्य सेवाहरुमा पहुँच वा सिफारिशहरु।
यो सेवा निःशुल्क, गोप्य तथा तपाईको आवश्यकताअनुरुप बनाइएको हो। त्यसमा कुनै समयसीमा छैन। तपाईको टोलीले तपाईको वित्तीय स्वाबलम्वनको प्राप्तिका लागि यथार्थपरक समयरेखाको पहिचानमा सहायता गर्नेछ।
‘वित्तीय स्वावलम्बन’ प्रत्येक मानिसमा फरक हुन्छ। तपाईको वित्तीय स्वावलम्बन केन्द्र यात्रा अद्वितीय हुनेछ।
गौरवशाली पार्टनर CommBank Next Chapter
तपाई योग्य हुनुहुन्छ यदि तपाईः
वित्तीय दुरुपयोगबाट बाँचेको व्यक्ति, पारिवारिक वा घरेलु हिंसाबाट पिडित हुनुहुन्छ भने।
सुधारको चरणमा हुनुहुन्छ भने (संकटमा होइन) र तपाईको वित्तीय भविष्यका लागि योजना विकास गर्न तत्पर हुनुहन्छ भने।
१८ वा सो भन्दा माथि उमेरको र अष्ट्रेलिया बस्नुहुन्छ भने। तपाई स्थायी बासिन्दा वा भिसामा हुनुपर्दैन।
तपाई कमनवेल्थ बैकको ग्राहक हुनुपर्दैन वित्तीय स्वाबलम्वन केन्द्रमा पहुँच पाउनका लागि। तपाईले प्रमाण उपलब्ध गराउनु पर्दैन वा सेवामा पहुँच पाउन आफ्नो कथा भन्नु पर्दैन।
वित्तीय स्वावलम्बन केन्द्र गुड शेपहर्डद्वारा वितरित हो र कमबैंक (CommBank.) द्वारा आर्थिक सहायताप्राप्त छ।
हाम्रो समर्पित टोलीलाई 1300 050 150 मा फोन गर्नुहोस्।
तुरन्तै फोन गर्नुहोस्
गुड शेपहर्डका बारेमा यहाँ थप जान्नुहोस्”
फो: 1300 050 150
हामीलाई फेला पार्नुहोस्
यहाँ तपाईको नजिकको प्रदायकलाई पत्ता लगाउनुहोस्
महिला तथा पेडे सापटी रिपोर्ट
महिला तथा पेडे सापटीबारेमा हाम्रो पछिल्लो रिपोर्ट पढ्नुहोस्
हाम्रो पछिल्लो संसाधन तथा प्रकाशनहरु हेर्नुहोस्
नीति तथा वकालत
हाम्रो पछिल्लो नीती तथा वकालतको काम हेर्नुहोस्